Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly: Minisitra HVM iray voarohirohy amin’ny trafikana andramena | NewsMada
Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly: Minisitra HVM iray voarohirohy amin’ny trafikana andramena
Par Taratra sur 10/04/2019
Mipoitra tsikelikely hatrany. Minisitra iray amin’ny fitondrana teo aloha indray no voatonontonona sy voarohirohy amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena. Efa heno hatrany ihany ny anarany tamin’ny fotoan’androny ary izao nomahafisin’ny rantsam-pitsarana momba ny kolikoly (Pac) izao.
“16 ireo antontan-taratasy dinihin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly amin’izao fotoana izao. Ahitana minisitra iray teo aloha, tamin’ny taona 2014 izany ary tafiditra amin’ny fanondranana an-tsokosoko andramena”, hoy ny lehiben’ny rantsam-pitsarana ( Pac), Mamonjy Berthin, tetsy Tsaralalàna, omaly. Nanteriny fa mbola ao anatin’ny famotorana avokoa ny momba ireo raharaha rehetra ireo. Ahitana olona avy any amin’ny faritra sy olona ambony teo aloha izany. Niaiky kosa anefa ny tanany fa mananosarotra ny fiantsoana azy ireo. Na izany aza, efa mitady ny fombafomba rehetra hanatonana azy ireo any amin’ireny toerana ireny ny Pac. Notsiahiviny koa fa efa misy migadra, asa an-terivozona mandram-pahafaty.
Misy anaran’olona ambony efa heno koa…
Etsy andaniny, nambarany fa hosahanin’ny eo anivon’ny Fitsarana avo (HCJ), misahana ny fitsarana ireo mpitondra ambony io minisitra na olona ambony teo aloha io. Efa misy anaran’olona hafa koa eo an-tanan’izy ireo saingy tsy tena mbola hita taratra izany. “Arakaraka ny fizotry ny famotorana ihany ny ahitana ny momba azy io”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, notsiahivin’ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques kosa ny momba ny fampiatoana ireo mpitsara any Toamasina ka nilazany fa tokony jerena tsara ny vesatra iampangana vao mampiditra olona am-ponja. “Mba tsy ho lasa fomba mahazatra fotsiny ihany izany…”, hoy ihany izy.
Fanafainganana ny fitsarana ireo any am-ponja
Mbola nanteriny hatrany koa ny ezaka ataon’ny fitsarana ny amin’ny hanafainganana sy fandinihana ny fitsarana ireo voatazona any am-ponja. Hisy ny fidinana ifotony hataon’ny minisitra momba izany. Manampy izany, hohatsaraina mba ho maoderina kokoa ny tontolon’ny fitsarana amin’ny alalan’ny fampitaovana ka hatao ho ara-informatika kokoa izany. Hatsaraina hatrany koa ny fomba fiasa. Hatao filamatra ho amin’izany ny any Antsirabe sy i Vatomandry amin’izao voalohany izao. Tsiahivina fa namory ireo lehiben’ny fampanoavana manerana ny Nosy ny minisiteran’ny Fitsarana nanomezana toromarika azy ireo eo amin’ny fanatanterahana ny asany sy ny hanatsarana izany hatrany.